संक्रमित मुलुकबाट नेपाल आउनेलाई क्वारेन्टिन ? - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » स्वास्थ्य » संक्रमित मुलुकबाट नेपाल आउनेलाई क्वारेन्टिन ?
२०७९ जेष्ठ १० गते ०९:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १० जेठ । विश्वमा फैलिएको बाँदरेखटिरा (मंकीपक्स) को संक्रमण नेपालमा पनि फैलनसक्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ ।
यसमा ज्वरो आउने, जीउ सुन्निने र ढाड, टाउको र मांसपेशी दुख्नेगर्छ । संक्रमण भएको केही दिनमा अनुहारमा पनि बिमिराहरू देखापर्न थाल्छन् । डब्लूएचओले जनाएअनुसार मंकीपक्स झट्ट हेर्दा फोहोर खटिरा वा ठेउला भनेर चिनिने गरेको रोगजस्तै देखिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सागर अधिकारीले जानकारी गराए ।
डब्लूएचओका अनुसार मंकीपक्स भाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा घाउको रस वा कणबाट र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुकलगायतका तरल पदार्थका माध्यमबाट फैलिने गर्दछ । संक्रमित व्यक्तिको शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ श्वासनली, आँखा, मुख वा नाकबाट छिर्नसक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, संक्रमित जनावरहरू जस्तै बाँदर वा मुसाको सम्पर्कबाट पनि यो भाइरस सर्नसक्छ । संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगा वा सामानबाट पनि सर्नसक्ने डब्लूएचओले जनाएको छ ।
हालसम्म ८० भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको र शंकास्पदको अनुसन्धान भइरहेको संगठनले जनाएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
राजविराजमा ‘ग्रीन, क्लिन र पिंक’अवधारणाका [...] Next
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, कहाँ [...]